waa Archives - Axadle
Waa maxay cawaaqibka ka dhalan kara qofka aan xirneyn wajiga wajiga?
Waa maxay cawaaqibka ka dhalan kara qofka aan xirneyn wajiga wajiga? Dowladda Hoose ee Xamar ayaa fulineysa amar uu saaka soo saaray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish Maarso 10, 2021 xirashada wejiga wajiga.
Axmed Cali Daahir: Soomaaliya waa dhibbane
Xeer ilaaliyihii hore ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa BBC u sheegay in maxkamadeynta ay ka bilaabmeyso magaalada Hague ee dalka Holland. Wafdiga Soomaaliya waxaa ka mid ah: R / wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka, Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay, Ergeyga Gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, Garyaqaanka Guud ee hore & wakiillo kala duwan. ka yimid Soomaaliya. Axmed Cali Daahir, Xeer ilaaliyihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya "Waxaan…
Ma danaynayno in halkan lagu dagaallamo “Mandheera”, waa khatar
Senator Max’ed Macallin Maxamuud oo wakiil ka ah ismaamulka Mandheera ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin tabashooyinka ay qabaan dadka soo doorta xilligan adag. Maxamed wuxuu sheegay in boqolaal taagersan wasiirka amniga Jubbaland oo diyaar u ah inay u dagaallamaan Cabdirashiid Janan ay ku sugan yihiin Mandheera ilaa dhammaadka Maarso 2020. Mudanaha ayaa sheegay in walwalka ugu badan ee dadka uu ku matalo kursiga ay tahay abaabulka socda, xiisada udhaxeysa labada dowladood oo umuuqata mid hurineysa dagaal &…